I-PTZOptics ikhupha uMlawuli we Joystick omtsha | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » Okufumaneka » I-PTZOptics ikhupha uMlawuli we Joystick omtsha
IDowningtown, PA-ngoFebruwari 17, 2021 - I-PTZOptics, Umenzi okhokelayo weekhamera zerobhothi ezisasazeka ngexabiso elifanelekileyo, ubhengeza ukukhutshwa kwe-PT-SuperJoy-G1 Joystick Controller, isisombululo esibanzi esixhasa ulawulo lwekhamera olusisiseko kunye nenethiwekhi. ISuperJoy ibeka imveliso yemveliso yeekhamera ngobunono ezandleni zabasebenzisi balo naliphi na inqanaba lesakhono. Abasebenzisi baya kuba nolawulo olubonisa ngokupheleleyo kuyo nayiphi na iPTZOptics okanye ikhamera yeHuddleCamHD, kunye nolawulo lwe Sony, Inja yentaka, I-Newtek,, kunye nezinye iikhamera ze-PTZ zoseto olukhethiweyo.
"Akukho tyala lingalunganga lokusetyenziswa kweSuperJoy," utshilo uMat Davis, injineli ekhokelayo kwi-PTZOptics. “Senze olu lonwabo ukuba 'sidlale kamnandi' ngokuseta kwabasebenzisi ezikhoyo. Sizama ukuyenza iphelele, ukusebenza kunye nezixhobo ezininzi kangangoko kunokwenzeka. Nokuba uthunyelwe phi, oku kufanelekile kwimeko leyo. ”
Ukucofa amaqhosha ngaphambili kunye nohlengahlengiso lwe-On-The-Fly
I-SuperJoy inokucwangciswa ukuya kuthi ga kwi-255 PTZ yekhamera esekwe ngaphambili, kubandakanya i-9 "yokuseta ngokukhawuleza". Abasebenzisi banokudala ukuya kuthi ga kumaqela amane olawulo lwekhamera ebavumela ukuba batshintshe ngokulula imifanekiso. Amaqhosha amane eSuperJoy anokwenziwa ngokwezifiso anokucwangciswa ukuba abangele "ukuseta okuphezulu" okufikelela ngaphaya kwekhamera, ukuthumela imiyalelo yesiko nge-HTTP, i-UART, i-TCP okanye i-UDP kwizixhobo ezisekwe kwinethiwekhi kubandakanya izibane, izithethi kunye nemiboniso. Ngokusisiseko nasiphi na isixhobo esilawulwa ngaphezulu kwe-IP sinokubangelwa yi-SuperJoy.
ISuperJoy ibonelela ngolawulo ngaphaya kwendawo yekhamera kunye nokusondeza. Usebenzisa amaqhosha ongezelelweyo, umqhubi unokuhlengahlengisa ipan, ukuthambeka, ukusondeza, kunye nesantya sokucwangcisa kwangaphambili ISuperJoy ikwanamaqhina okwenza uhlengahlengiso kwimizuzu ukusondeza, ukugxila, iris / iisetter shutter, kunye nokuzuza okubomvu noluhlaza okwesibhakabhaka. Eli gunya lokucoca kakuhle lilungelelaniswe nokukwazi ukuseta iindawo zokugada kulawulo olukhoyo. "Imowudi esisiseko" eyakhelweyo ikhubaza ulawulo oluninzi ngaphandle kolawulo lwekhamera eyodwa kunye nokuseta kwangaphambili, ngelixa "imo ye-matrix" inika umsebenzisi amandla okubiza ukucwangciswa ukuya kuthi ga kwiikhamera ezintathu. Nokuba yeyiphi imowudi, iSuperJoy ikhanyisa amaqhosha afumanekayo omsebenzisi. Iindlela ezisisiseko kunye neematriki zivumela amavolontiya kunye nabasebenzisi be-novice ukuba bathathe inxaxheba kwimveliso yevidiyo ngaphandle koloyiko lokwenza impazamo.
Eziguquguqukayo, ezinamandla, ezifikelelekayo
Ngoku iyafumaneka uku-odola i- $ 989 US MSRP, iSuperJoy yenzelwe ukujongana noluhlu olubanzi lwezicelo, ubungakanani bemveliso kunye neeseti zobuchule. Ngobuchule bayo obusecaleni kunye nokulungelelanisa ukusebenza kakuhle, esi sisombululo sinokuzisa ezona mveliso zinzima zekhamera phantsi kolawulo. I-SuperJoy ibandakanya iwaranti yeminyaka emi-2 kwaye iyafumaneka ngoku kwi-oda yangaphambi kwexesha. Ukufumana iinkcukacha zemveliso kunye nolwazi oluthe kratya, ndwendwela ptzoptics.com/superjoy/.
I-PTZOptics ngumenzi wepani yerobhothi, ethambisayo, yokusondeza izisombululo zekhamera yezicelo ezahlukeneyo zosasazo, kubandakanya zombini ukuveliswa kwevidiyo kunye nokusasaza bukhoma. Eyasungulwa ngo-2014, i-PTZOptics yaphazamisa i-industry ye-audiovisual shishini xa iqela leenjineli ezivela kwiinkampani ezihloniphekileyo zokudibanisa iinkqubo zenza i-portfolio yeekhamera eyayiyinxalenye yombono wabo wokwenza "ummese waseSwitzerland" kwiimfuno ezinzima ukusasazwa kwemihlaba. Ekwindawo eseDowningtown, ePa., Ukuqala ngokukhawuleza kuye kwacima ezinye zeempawu ezinkulu kudidi lwekhamera ye-PTZ ekhulayo. Ngokusasazwa kwehlabathi ngaphezulu kwamazwe e-50, i-PTZOptics ivelise izibonelelo ezihamba phambili zeshishini, kubandakanya ne-StreamGeeks livestream series. UPTZOptics kaPaul Richards ubhale iincwadi zokuhlola ngezihloko ezishushu zeshishini, ezinje nge "Ukunceda iBandla laKho ukuba liSasaze ngokuPhilayo" kunye ne "Esports kwizeMfundo." Iqela lakhe likwavelisa iNgqungquthela yoNqulo yekota, edibanisa amawaka eenkokheli zecawe kunye namavolontiya kwihlabathi liphela. I-PTZOptics yinkampani yoodade eya eHuddleCamHD, abavelisi beekhamera zeenkomfa zevidiyo. Funda ngakumbi kwi www.PTZOptics.com.
IGosa loSasazo eliyiNtloko at I-PTZOptics
UPaul Richards uliGosa eliyiNtloko eliSasaza le-PTZOptics. URichards ngumbhali wokuNcedisa iCawe yakho iLife Live, ii-Esports kwezemfundo, iKharityhulamu eNtsha yeKlaza losasazo, kunye nolunye upapasho oluhambelana nokusasazwa.
Izithuba zamva kaPaul Richards (ndinibone nonke)
I-PTZOptics ikhupha uMlawuli we Joystick omtsha - Februwari 18, 2021
I-Jumpstart Amandla aKho oSasazo aBukhoma ngeNgqungquthela yeStreamGeeks - Novemba 25, 2020
Ukusasazwa bukhoma kunye neVidiyo yeNcwadi yokuKhokela ikhutshelwe ukunceda abaFundi ukuba baFumane izakhono zenqanaba le Studio - Oktobha 2, 2020
Yovuyo PTZ I-PTZOptics SuperJoy 2021-02-18
Previous: Ukuzisa uSuku lwase-Australia ebomini kude
next: Ngowama-2020 ukuwa kweThelevishini kunye nokuSasazwa kweNkqubo yokuThembela kuYilo lweMnyama